बेलायती राजकुमार ह्यारीका कर्तुत (तस्बिरसहित) | Hakahaki
बेलायती राजकुमार ह्यारीका कर्तुत (तस्बिरसहित)
१६ चैत, सप्तरी । नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहेका बेलायती राजकुमार ह्यारीबारे नेपालमा श्रमदान गरेका खबरदेखि भलिबल खेलेको, भाषण गरेको, घुमफिर गरेका खबरहरु सम्प्रेषण भइरहेका छन् । ह्यारीसँग नेपालका नेताहरुको तुलाना भइरहेको छ । तर राजकुमार ह्यारी बेलायतमै भने विवादमा परिरहने व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् । उनको चर्चित विवादहरु :
१ . सन् २००९ मा राजकुमार ह्यारीको एक भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । जसमा उनले आफूभन्दा तल्लो तहका पुरुष सैनिकलाई किस गरिरहेको, अनुहारमा चाटिरहेको देखिन्थ्यो । उनको त्यो भिडियोले उनको यौनिकताबारे प्रश्न उठाइयो ।
२. एक पटक ह्यारी महिलाले लगाउने ब्रा लगाएर एउटा पार्टीमा मस्ती गरिरहेको भेटिए । उनको हातमा बियर पनि थियो । रक्सीले मातेको सुरमा ह्यारीले यस्ता उट्पट्याङ काम गरेको विश्लेषण गरियो ।
३. ह्यारीलाई १७ वर्षकै उमेरमा सुधार केन्द्र राखिएको थियो । उनी रक्सी र गाँजाको नशामा नेपालका पूर्वयुवराज पारस शाहकै हालतमा पुगेपछि उनका बुवा चाल्र्सले सुधार केन्द्रमा राखेका थिए ।
४. सन् २००४ मा नाइटक्लबाट बाहिर निस्किदै गर्दा ह्यारीको फोटो एक पापराजीले खिचे । नाइट क्लब गएको भेद खोल्न खोजको भनेर ह्यारी ती फोटोग्राफरसँग जाइलागेका थिए । ह्यारीले फोटोग्राफरको अनुहारमा धेरै मुक्का पनि वर्षाए ।
५. सन् २००५ मा ए लेभलको परीक्षामा ह्यारीलाई उनकै शिक्षकले चिट चोराएको आरोप छ । ह्यारी पढ्नमा भूस भएका कारण उनका शिक्षकले उनलाई चिट चोराएर पास गराएको चर्चा चलेको थियो । ह्यारी र उनका शिक्षकले यो आरोप अश्वीकार गरेका थिए ।
६. सन् २०१० मा पोलो खेलिरहेको बेला ह्यारीको घोडाको खुट्टमा चोट लाग्यो । घोडाको खुट्टबाट रगत बग्न थाल्यो । तर ह्यारीले खेल नसकिउञ्जेल घोडामै चढिरहे । उपचार गराएनन् । यो घटनापछि ह्यारीको मनमा दया नभएको ‘हर्टलेस’ भनेर आलोचना गरियो । जनावरहरुप्रति ह्यारी दानवीय व्यवहार देखाउँछन् भनियो ।
७.ह्यारीको नांगो फोटो पनि सार्वजनिक भएको थियो । उनको फोटोमा उनीसहित अर्को एक पुरुष पनि नांगो देखिएका थिए । भेगासमा भएको एक पार्टीका क्रममा ह्यारीलाई अर्को पुरुषसँग नांगै पाइएको थियो । उनको त्यो फोटो पार्टीमा सहभागी एकजनाले सार्वजनिक गरेका थिए ।
.ह्यारीको हातमा रक्सीको गिलास, अनि नाजी कपडा लगाएको फोटोले बेलायतमा तहल्कै मच्चायो । जसरी हिट्लरले स्वस्तीक चिन्ह आफ्नो पाखुरामा लगाउँथे, ह्यारीको सर्ट पनि नाजी पोशाक सम्झाउने खालेको थियो । फोटाका विषयमा पछि भनियो, ‘ह्यारीले सर्ट लगाएका हुन्, त्यसमा स्वस्तीक चिन्ह थियो । अरु केही होइन ।’ काठमाडौं टुडेमा खबर छ ।